मागि हिँड्ने जेब्रा
जुलाइ ११, २००८
कुनै कुनै जनावर त निकै चतुरा हुन्छन। मानिसहरुको भावना चट्टै बुझ्ने। देख्नु पर्दैन। अलक्कै अड्कल काढ्छन यिनिहरुसँग केहि न केहि छ खानेकुरा । खानेकुरा झोलासोलामा झुण्डिएको हुनुपर्दैन कतै लुकाएका छन यिनले भनेर थाह पाउँछन। पेरिसको त्यस्तै २५...
नक्कल गर्छन हाम्रा नेता जिवजन्तुको अक्किल
जुन १७, २००८
माओवादी अध्यक्ष प्रचण्ड निकै चलाख छन । बाठा छन । राजनितिमा यि सर्वाधिक चतुर र कुशल खेलाडी मानिन्छन अहिले । त्यसो त, प्रधानमत्रि गिरिजाप्रसाद कोइरालापनि कम्ति चतुर मानिदैनन । परिस्थिति, अवस्था, आवश्यकता र खाँचो अनुअसार यिनीहरु आफ्नो...
जुन १५, २००८
बाँदरहरुले यसो कल्पनाशक्ति प्रयोग गरेकै भरमा रोबोट चलाएर आहारा खान सक्ने तथ्य फेला परेको छ। मस्तिष्कका दुई वटा सचेतक (सेन्सर) को सहायताले यान्त्रिक पाखुरा चलाउन सिकेका छन तिनले। अनि त्यसैको सहायताले आहारा खाने अक्किलपनि निकालेका छन। त्यसका...
लगातार एक घण्टा संभोग, ५६ पटक स्खलन
वसन्तको आगमनले रुख विरुवामा मात्रै हरियाली ल्याउँदैन। वन र वन्स्पतिमा उमंगपनि थप्छ। चराहरु उत्साहित हुन्छन। झाडिमा लुकेकाहरु बाहिर निस्केर मुक्त कण्ठले गाउन थाल्छन। किरा र भुसुनासमेत झुन्झुनाउन थाल्छन। नौला मुना र पालुवाले जिवजन्तुलाई थप ह्रिष्टपुष्ट पार्छ। शरिर...
कुखुरा पहिले कि फुल ?
मे ६, २००८
हामी वाल्यकालमा हुँदा विद्दालयमा तरबार बलीयो कि कलम?, आमा ठुलो कि बुवा ?, बल ठुलो कि बुद्दि ठुलो?, कुखुरा पहिले कि फुल पहिले? यस्तै विषयमा वादविवाद गर्थ्यौं। बडो गाह्रो हुन्थ्यो। रमाईलोपनि। वादविवाद त गरिन्थ्यो आफ्नो पक्ष जे...
आँखै अगाडी बलात्कार (दूर्लभ तस्बिर)
गत सालकोको कुरा हो। सायद अप्रिल महिनाको। बिहान ९.३० बजे घाम राम्रैसँग लागिसकेको थियो। नजिकैको पार्कमा गएँ। ताल वरिपरि केहिबेर हिडे चराहरुको चहलपहल हेर्नुपर्‍यो भनेर। त्यहाँ निलसर चराको चहलपहल खुबै देखियो। एउटै पोथीको पछाडि केहि भालेहरुले पिछा...
मान्छेलाई छैन कुकुरलाई चर्पी
अप्रिल २८, २००८
बिदाको दिन। दिन पनि रुन्चे। निरस जस्तो बनायो। यसो निस्कौं त नि पार्कतिर भनेर निस्कि इयो। यस्तो रुन्चे मौसम भएका बेला पार्कमा जाने त आफुमात्रै भइएला भन्नेलाग्दा लाग्दैपनि हिडियो। पार्कमा पुग्दा त ओहो कति हुन कति मानिस।...
भालेका निम्ति यत्रो बबाल ?
अप्रिल २५, २००८
भनिन्छ-बैंश चढेका बेला कुकुरको पुच्छर बांगो देख्दापनि हाँसो उठ्छ। रिसपनि त्यत्तीकै उठ्छ। मानिसका अनेकानेक चर्तिकला त छँदैछन । बंैशले छोएका बेला मानिसमात्रै किन पोथी पाउँदा कुनै कुनै जनावर त झन फुरुंग भएर भोकै पनि बस्छन। उदाहरण कति...
–ददिराम सापकोटा थुप्रै महिलाहरुसँग यौन संसर्ग राख्ने पुरुषको हालत के हुन्छ हाम्रो समाजमा ? उ यौन दुराचारिकारुपमा गनिन्छ। कारवाहीको भागी त हुन्छ नै। समाजमा बेईज्जत भएर नाकै देखाउन मुश्किल। समाजिक बेईज्ज्त छँदै छ, थुप्रै महिलाबाट जन्मिएका बालबचेरालाई...